पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिए यस्तो जवाफ – माहुरी . Bee
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका भनाइले विवादको तरङ्ग फैलाएको छ। यो कुरा उनले रामजन्मभूमि अयोध्याका विषयमा चासो अगाडि बढाएपछि आएको हो।
प्रधानमन्त्रीले गत असार २९ गते भानुजयन्तीका दिन राम नेपालकै ठोरी क्षेत्रमा जन्मेको हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
उनले गत शुक्रबार माडी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदीलाई टेलिफोनमार्फत अयोध्यापुरीको अध्ययन गर्न अनुरोध गरेका थिए।
“त्यहाँ के कस्ता संरचना छन्, केके बनाउनुभएको छ । भारतमा भएको अयोध्याका विषयमा त्यहाँका जनतासमेत विश्वस्त नरहेको पाइएकाले हाम्रो अयोध्याका विषयमा थप अध्ययन र संरक्षणमा जुट्नुपर्छ । तपाईँहरु के के गर्दै हुनुहुन्छ, तुरुन्तै काम अघि बढाउनुपर्‍यो।“ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले वडाध्यक्ष सुवेदीलाई भनेको समाचार देशसंचार अनलाइनमा प्रकाशित छ।
‘पुरातत्विक विभागसँग समन्वय गरेर अध्ययन र संरक्षणमा जुट्न’ पनि प्रधानमन्त्रीले सुवेदीलाई निर्देशन दिएका छन्। हालको माडी नगरपालिका वडा नम्बर ९ यसअघिको अयोध्यापुरी गाउँ विकास समितिमा पथ्र्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीका उक्त दावीपछि भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले प्रतिकार स्वरूप गौतम बुद्ध भारतीय भएको दाबी गरेका छन् । भारतीय उद्यमी तथा व्यवसायीहरुको छाता संगठन कन्फडरेसन अफ इण्डियन इन्डष्ट्रिद्वारा गत शनिबार आयोजित ‘इण्डिया एट ७५ भर्चुअल सम्मेलन’मा सम्बोधन गर्ने क्रममा जयशंकरले त्यसो भनेका हुन् ।
सदियौंदेखि नेपालको रहेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो दावी गरेर नयाँ नक्सा निकालेपछि त्यसको नेपालले अस्विकार गरेको थियो। पछि नेपालले पनि उक्त भु-भाग समेटेर नयाँ नक्सा निकाल्यो। भरतीय पक्षको दवीपछि नेपालले पटक पटक दुईपक्षीय वार्ताकोलागि गरेको आग्रहलाई भारतले वेवास्ता गरेपछि नेपालले पनि उक्त भु-भाग समेटेर नयाँ नक्सा निकालेको थियो। अहिले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चीसिएको अवस्था छ।
नेपाल र भरतीय पक्षले वार्ताको कुटनीतिलाई पर धकेल्दै पवित्र राम र वुध्दलाई नै विवादमा तान्नु कसैको हितमा नहुने कुरामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जोडदिएका छन्। हालै ट्वीटरमा ट्वीटगर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भनेका छन्- “देश र जनताको जीवनको जिम्मा लिएका जिम्मेवार पक्षहरू आदिकालीन पात्रहरूमा अल्झिनुमा कुनै तुक छैन। केवल नागरिकमा भ्रम पैदा गरि सत्ताको आयु बढाउने खेल मात्र हो। को कसको हो भन्ने कुरा सबैलाई राम्ररी नै थाहा छ। केवल आत्मरतीका लागि रचिएका नाटकहरूको मूल्याङ्कन नागरिकले समयमा नै गर्लान्।“ यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीका दावीप्रति लक्षित छ।
त्यसैगरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले अर्को ट्वीटमा भनेका छन्- “भगवान गौतम बुद्धका बारेमा कसैले भ्रम छर्नु उनको अपमान मात्र हो। विद्वत् वर्गले जानेर त्यो भूल कहिले गर्दैन। भगवान् बुद्ध नेपालमा नै जन्मिएका हुन् भन्ने कुरा सारा विश्वलाई सप्रमाण थाहा छ। दुई हजार पाँचसय वर्ष भन्दा पहिले नै स्थापित भएको सत्यलाई कसैले आज परिवर्तन गर्न सक्दैन।“ उनले भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले भगवान गौतम बुद्धका बारेमा गरेको दाविको खण्डन गरेका छन।
भगवान गौतम बुद्धका बारेमा कसैले भ्रम छर्नु उनको अपमान मात्र हो। विद्वत् वर्गले जानेर त्यो भूल कहिले गर्दैन। भगवान् बुद्ध नेपालमा नै जन्मिएका हुन् भन्ने कुरा सारा विश्वलाई सप्रमाण थाहा छ। दुई हजार पाँचसय वर्ष भन्दा पहिले नै स्थापित भएको सत्यलाई कसैले आज परिवर्तन गर्न सक्दैन।
यस्ता आरोप प्रत्यारोपले कसैको हित हुने छैन। त्यसैले दुवै पक्षले वार्ताद्वारा समस्याको समादान खोजिनु पर्छ।
धार्मिक वा साँस्कृतिक पात्र वा स्थानका आफ्नै महत्व र विश्वास हुन्छन्। सयौं वर्ष लागेर बनेका यस्ता विश्वास र महत्वलाई खल्बल्याउनु किमार्थ उचित हुन्न। चित्त नबुझेका कुराहरू कुटनीतिक पहलबाट सुल्झाउनु पर्छ। अनर्गल प्रचारबाजीले समस्याको जालो झन् कठीन गाँठो बन्न सक्छ।
— G. Shah (ज्ञानेन्द्र शाह) (@GBBShah) July 14, 2020
Tagged अयोध्यापुरी, गौतम बुद्ध, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, प्रधानमन्त्री ओली, प्रवासी नेपाली, भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकर, रामजन्मभूमि अयोध्या
Previous Postकोरोना र शक्ति ध्रुविकरण
Next Postलकडाउन मात्रै समाधानको उपाय होइन